Ny Vavonan'i Isis
MOMBA ANAY ▼ ︎
-BOKIN'NY Vavolombelon'i Jehovah ▼ ︎
Fisainana sy faniriana
Lehilahy sy Vehivavy ary Ankizy
Ny demokrasia dia fitondram-panjakana
Akora ary famantarana
Fotoana fohy amin'ny namana
Search ny tranokalan'ny Word Foundation
Fikaroham-baovao avy amin'ny gazety The Word
Ny Veil of Isis dia miparitaka manerana an'izao tontolo izao. Eto amin'izao tontolo izao dia ilay akanjo hita maso an'ny fanahy ary asehon'ny olona roa mifanohitra.
- Ny Zodiac.
Vol. 6 OKTOBRA, 1907. Tsia
Copyright, 1907, avy amin'ny HW PERCIVAL.
NY ANY ISISY.
ISIS dia voalaza fa efa virjiny-rahavaviny-reny. Izy dia nantsoina ho vadin'ny lanitra, mpitondran'aina, renin'izay miaina rehetra ary manome sy mpanome endrika.
Isis dia fantatra tamin'ny anarana maro hafa ary ivavahan'ny fianakavian'ireo olona tany am-boalohany nanerana ny tany Ejipta. Ny laharana sy ny kilasy rehetra dia mitovy amin'ny mpivavaka amin'ny Isis. Ilay andevo ambanin'ny fandroahana, izay ny tranonkala fiainany dia nohodinin'ny herin'ny asany isan'andro teo ambonin'ny vaton'ny piramida; ny hatsaran-tarehy malefaka, izay nofinofy mahafinaritra ny fiainana tao anatin'ireo mozika malefaka sy voninkazo manitra, nandro ditin-kazo manitra ary feno rivotra feno hafanam-po, izay ny fahatsapana rehetra dia manaitra ny zava-kanto sy ny fahaizan'ny firazanana ary ankafizin'ny firenen'ny vanim-potoana. eritreritra sy ezaka; ny astronomia-magician izay avy amin'ny toerany teo amin'ny piramida dia nandinika ny fihetsiky ny mpandehandeha any an-danitra, nandrefy ny tahan'ny hafainganam-pandehany sy ny fivezivezen'ny dia, ka namboarina avy tamin'ny vanim-potoana hisehoany tao amin'ny habakabaka nanerana ny tantarany, ary nahalala ny fiaviany ary mifarana: mitovy amin'ny mpivavaka amin'i Isis avokoa ny rehetra, fa samy araka ny sokajy misy azy sy tsara fanahy ary avy amin'ny fahalalana azy.
Ilay mpanompo izay nasain'ny asa an-keriny dia tsy nahita ilay "renin'ny famindram-po." Dia niankohoka tamin'ny zavatra iray azony izy ary lazaina fa masina ho azy: sarin-javatra voasokitra, izay hampidinany. mivoaka ny fangidian'ny fanahiny ary mivavaka mba hanafahana amin'ny fatoran'ny tompon'andraikitra. Nesorina tamin'ny fisasarana sy ny zava-tsarotra, saingy ny fahalalana an'i Isis dia tsy tsara noho ny andevo amin'ny fanaintainana, ny hatsarana, andevon'ny fahafinaretana, no niangavy ny Isis tsy hita tamin'ny alàlan'ny famantarana ny voninkazo sy ny tempoly ary ny fahaizan'i Isis mba hanohizany ny fanomezana soa nankafizin'ny mpiondana. Raha mihetsika ny lanitra selestialy dia hahita ny lalàna sy ny tara-masoandro. Ao anatin'izany no hamakiany ny lalàna sy ny tantaran'ny famoronana, ny fitehirizana ary ny fandringanana: hampifandray azy ireo amin'ny eritreritra sy ny eritreritry ny olombelona ary hamaky ny ho an'ny dynasties araka ny didin'ny olona. Nahatsikaritra ny firaisankina nandritra ny hetsika tsy nahaliana, lalàna ao anatin'ny fisafotofotoana sy zava-misy ao ambadiky ny fisehoana, nampahafantatra ny lalàn'i Isis tamin'ireo governora tompon-tany ny lalàn'i Isika, izay nanaiky ny lalàna araka ny toetrany sy ny fahendreny. Ny fahitana ny tsy mety mihetsika ny lalàna sy ny firindrana amin'ny alàlan'ny endriny rehetra, dia nanaja ilay lalàna ny astronomista-majika, nanao mifanaraka amin'izany ary nanompo ny tena zava-misy iray amin'ireo endrika noforonin'ny Isis tsy hita maso.
Ireo andevon'ny alahelo sy fahafinaretana dia tsy mahalala an'i Isis amin'ny alàlan'ny endrika sy fahatsiarovan-tsaina ihany; Ilay hendry dia nahafantatra an'i Isis ho mpamokatra maharitra sy mpanohana ny zavatra rehetra.
Niova kely ny olombelona hatramin'ny andron'ny Khem fahiny. Ny faniriany, faniriany ary faniriany dia tsy mitovy amin'ny ambaratonga fotsiny fa tsy amin'ny karazany. Ny fitsipiky ny fahalalana dia mitovy amin'ny morontsiraka. Ireo fomba sy endriny irery dia niova. Ireo fanahy izay nandray anjara tamin'ny fiainam-piainan'i Egyptiana dia afaka miditra indray amin'ny kianja ankehitriny. Tsy maty tany Ejipta i Isis na dia tsy mbola teraka izy. Ny fanompoam-pivavahana dia misy ankehitriny toy ny teo.
Ilay mpitrandraka harena ankibon'ny tany dia nivavaka tamin'ilay sarin'i Maria mba hanafaka azy amin'ny rojo vy miasa. Ny chaser ny fahafinaretana dia mivavaka mba hitohizan'ny fahafinaretana. Ilay lehilahy hendry dia mahita lalàna sy filaharana amin'ny alàlan'ny tsy rariny sy fisafotofotoana ary miasa mifanaraka amin'ny hany zava-misy izay ianarany amin'ny alàlan'ny fisehoana rehetra. Ny Isis dia tena misy ankehitriny toy ny tamin'ny andron'i Khem. Ny Isisela ankehitriny dia ivavahan'ny votera azy ho sampy, tena filokana, na tena izy, toa azy taloha. Niova ny anarana sy ny endrik'ireo fivavahana saingy mitovy ny fanompoana sy ny fivavahana. Hitan'ny olona sy hivavaka amin'ny Isis araka ny toetrany, ny toetrany ary ny haavon'ny fampandrosoana. Raha ny fanompoam-pivavahana any Isis dia arakaraka ny fahendren'ny vahoakan'ny Egyptiana, dia toy izany koa ankehitriny araka ny faharanitan'ny vahoakantsika. Saingy na dia talohan'ny fiakaran'ny sivilizasiona antsika hatrany amin'ny toerana misy ny voninahitra sy ny fahendren'i Egyptiana dia mihamalalaka amin'ny fivavahan'izy ireo ny Isis tahaka ny nataon'ny Ejipsianina tamin'ny faharatsian'ny Egypt. Ankoatry ny fahatsapana ny saina, ny herin'ny vola, ny politika, ary ny pretra no manakana ny fahalalana ny Isis amin'izao andro izao na dia tamin'ny andron'i Ejipta aza.
Izay hahafantatra an'i Isis dia tsy maintsy mandalo mihoatra ny fisalobonana mankany amin'ny sehatry ny Isis tsy mety maty; fa ny olona rehetra maty Isis dia tsy fantatra afa-tsy amin'ny maha-izy azy, matanjaka tsara ary voasarona matevina.
Fa iza moa Isis ary inona ny lambany? Ny hevi-diso momba ny vavonin'ny Isis dia mety hanazava. Toy izao ny hazakazaka:
Isis, renintsika tsy manam-petra, voajanahary, habaka, dia mitafy ny fisalobonany mahafinaritra ka amin'ny alalany no mety hiantsoana ny zava-drehetra sy ny maha-izy azy. Isis nanomboka tamin'ny tontolon'ny vanim-potoana tsy nahavelom-bolo azy ary rehefa naniry izy dia natsipiny ilay lamba teo amin'ny fisalobony, tsara kokoa noho ny tara-masoandro, momba ny maha-andriamanitra. Manohy amin'ny alàlan'ny tontolo mavesatra kokoa, ny voaly dia namboarina araka izany mandra-pahatongany sy nameno ny mety ho faty sy ny tontolontsika.
Avy eo ny olona rehetra dia nijery sy nahita avy amin'ny ampahany amin'ny fisalobonana izay misy azy ireo, ny hatsaran-tarehin'i Isis amin'ny alàlan'ny takelaka mandrakotra ny voaly. Avy eo dia hita tao anatin'ny voaly ny fitiavana sy ny tsy fahafatesana, ilay mpivady mandrakizay sy tsy azo sarahina, izay ivavahan'ny andriamanitra avo indrindra amin'ny fanompoana feno fanajana.
Avy eo ny olona dia nanandrana nametraka ireo filoham-pirenena mandrakizay ireo ho endrika hitahiry sy hahatsapany azy ireo ao anatin'ny voaly. Nizarazara ny fisalobonana; amin'ny andaniny lehilahy, tamin'ny vehivavy hafa. Ao amin'ny toerana misy ny fitiavana sy ny tsy fahafatesana, ny voaly miharihary amin'ny olona misy ny tsy fahalalana sy ny fahafatesana.
Avy eo ny tsy fahalalàna dia namoaka rahona maizina sy manafotra manodidina ny voaly izay mety tsy hanitsakitsaka ny fitiavana ny zanak'olombelona tsy mety manitsakitsaka ny fitiavana amin'ny fiezahan'izy ireo manarona izany ao anatin'ny voaly. Ny fahafatesana koa, dia nanampy ny tahotra ny haizina, izay tsy fahalalany, ka ny olombelona tsy ho voan'ny fahantrana tsy manam-petra amin'ny fiezahana hamolavola ny tsy fahafatesana ao amin'ny valan'ny sarona. Ny fitiavana sy ny tsy fahafatesana koa dia afenina amin'ny olombelona tsy fantatra noho ny tsy fahalalana sy ny fahafatesana. Ny tsy fahalalana dia manamaizina ny fahitana ary ny fahafatesana manampy ny tahotra, izay manakana ny fitadiavana fitiavana sy tsy fahafatesana. Ary maty, matahotra sao ho very tanteraka izy, mamihina sy mifikitra eo amin'ny voaly ary hiakiaka hivoaka any amin'ny haizina mba hanome toky ny tenany.
Isis dia mbola mijanona ao anatin'ny fisalobony hiandry mandra-pahafahan'ny zanany no ho matanjaka tsara handrindrina azy ary hahita ny hatsarany tsy misy loto. Mbola eo foana ny fitiavana hanadiovana sy hanadiovana ny saina amin'ny tasy maizina sy ny ratra amin'ny fitiavan-tena sy ny fitiavam-bola, ary hampisehoana ny fiarahana amin'ny fiainana rehetra. Ny tsy fahafatesana dia an'ny olona izay tsy mijanona ny masony, fa mijery tsara amin'ny voarobak'i Isis, sy any aoriana. Avy eo ny mahita fitiavana dia tsapany ho an'ny rehetra, lasa mpiaro, mpanohana, ary mpamonjy na zokiny, amin'ny Isis sy ny zanany rehetra.
Isis, madio sy tsy misy pentina, dia akora fototra voan'ny tsiranoka mandritra ny fetra tsy misy fetra ary tsy misy fetra. Ny firaisana ara-nofo dia ny fisarobak'i Isis izay manome fahitana amin'ny zava-dehibe na dia ahitan'ny zanak'olombelona azy aza izany. Avy amin'ny eritreritra sy ny fihetsiky ny olona sy ny zavamananaina tontolo iainana, izay nitazona an'i Isis (natiora, zava-maniry, habaka) tao anatiny, namerina ny tontolontsika araka ny lalàn'ny antony sy ny vokatr'izany. Ka i Mom Isis no nanomboka ny fihetsiny tany amin'ny faritra tsy hita maso ary nisy tsikelikely teo am-piandohana izay rehetra nandray anjara tamin'ny fivoarana teo aloha; koa noforonina avy amin'ny tsy hita maso ny tontolontsika, raha misarika rahona tsy misy rahona ny rahona. Tamin'ny voalohany dia voahaja sy feno rivotra ny zavatr'izao tontolo izao; nilentika tsikelikely tao amin'ny vatany sy ny endriny izy ireo mandra-pahatongan'ny farany ho toy ny ankehitriny. Tamin'ireny andro voalohandohany ireny anefa, dia nandia ny tany niaraka tamin'ny olona ny andriamanitra, ary ny lehilahy dia nitovy tamin'ny andriamanitra. Tsy fantatr'izy ireo ny firaisana toy ny ataontsika ankehitriny, satria tsy voasokitra firy akory izy ireo, fa nanjary tsikelikely izy ireo rehefa nahatsapa ny hery ary nanjary be korontana. Ny fahitàn'ireo olona tsy mpivady dia tsy misy rahona noho ny antsika; nahita ny tanjon'ny lalàna izy ireo ary niasa araka izany; fa satria ny sain'izy ireo dia nohazavaina hatrany tamin'izao tontolo izao, ary mifanaraka amin'ny lalàna voajanahary, ny masony dia mihidy amin'ny tontolon'ny fanahy, ary misokatra bebe kokoa amin'ny tontolo ety ivelany; nihalehibe izy ireo ary lasa olon-tsotra izay iainantsika ankehitriny.
Tamin'ny andro taloha, ny vatantsika dia vokarina amin'ny alàlan'ny lalàna voajanahary. Ny vatantsika ankehitriny dia vokatry ny faniriana, ary matetika mitranga noho ny fanirian'ireo izay mamorona azy io matetika. Mipetraka ao amin'ny vatantsika isika eo amin'ny faran'ny farany amin'ny arko tsy fandraisana andraikitra ary amin'ny arety miakatra amin'ny tsingerin'ny evolisiona. Ankehitriny dia afaka manomboka manomboka ny fiakarana, avy amin'ny vala faran'izay henjana sy mavesatra indrindra hatrany amin'ny tadin-tariby indrindra sy manify indrindra amin'ny voarobak'i Isis, ary manindrona ny fisalonana mihitsy aza, miakatra ambonin'izany, ary mijery an'i Isis ny tenany fa tsy amin'ireo endrika marobe izay isika anontanio izy mba ho izy, manazava azy amin'ny fisalobonana.
Araka ny lalàna izay itondrantsika izao tontolo izao dia ny olona rehetra izay tonga eto amin'izao tontolo izao dia manao izany amin'ny alalan'ny fanekena an'i Isis. Dia manenona azy ny voaly izay tokony hataony mandritra ny fivahinianany eto. Ny sarin'ny Isis, firaisana ara-nofo dia esorina ary noravahan'ireo marika, izay nantsoin'ny tranainy ho ny Zanakavavin'ireo Ilaina.
Ny lamban'ny Isis dia miitatra manerana izao tontolo izao, fa eto amin'izao tontolo izao kosa dia asehon'ireo olona roa mifanohitra. Ny firaisana ara-nofo dia loaka tsy hita maso izay anjaitra ireo akanjo izay napetraky ny olona tsy manam-pahaizana mba hidirany amin'ny ara-batana sy handray anjara amin'ny raharaham-piainana. Amin'ny alàlan'ny asan'ny mpanohitra, fanahy ary zava-dehibe no toy ny pail sy ny lamba, dia manidina tsikelikely ilay lamba manarona ny fanahy; fa ny savoka sy ny lamba dia toy ny zavamaneno sy ny fitaovana izay ovaina tsy tapaka ary omen'ny fiasan'ny saina amin'ny faniriana. Ny fisaintsainana dia vokatry ny fihevitry ny saina amin'ny faniriana sy amin'ny alàlan'ny fisainana (the) ny foto-kevitry ny fiainana (♌︎).
Ny fanahy dia mandray ny voaly Isis satria raha tsy eo izy ireo dia tsy afaka mamita ny tsingerin'ny dian'izy ireo mamakivaky ireo tontolon'ny endrika; fa rehefa naka ny voaly izy ireo, dia nanjary nihaingo be teo amin'ny valanorony izay tsy ho hitan'izy ireo ho tanjon'ny fanenona, na inona na inona afa-tsy ny fahafinaretana ara-tsosialy na filana ara-nofo.
Ny fanahy dia tsy manana firaisana ara-nofo; fa rehefa mitafy voaly dia toa manao firaisana foana. Ny lafiny iray amin'ny voaly dia miseho amin'ny maha-lehilahy, ny lafiny iray amin'ny maha-vehivavy, ary ny fifampiraharahana sy ny fihodinan'ny voaly dia manala ny hery rehetra izay milalao ao. Avy eo dia noforonina sy nampivoatra ny fihetseham-po tamin'ny voaly.
Ny fihetseham-po dia ny filan'ny fihetseham-pon'olombelona izay miitatra isaky ny androm-piainan'olombelona, ​​avy amin'ny fanamorana, amin'ny fihetseham-poko, ary amin'ny alàlan'ny fiandohan'ny poeta rehetra manatrika ny kolontsain'olombelona. Ny fihetseham-po sy ny fitondran-tenan'ny Isis dia aseho toy ny mpamono izay mividy ny vadiny na mampitombo ny isan'izy ireo amin'ny alana hisambotra; amin'ny asan'ny chivalry; amin'ny finoana ny namorona ny firaisana tsirairay avy ho an'ny iray hafa; ary avy amin'ireo izay nandika ny tanjon'ny firaisana araka ny karazana hevitra mahafinaritra rehetra. Ny fihetseham-po rehetra dia samy manatsara ny hasarobidin'ny firaisana ara-nofo rehetra. Saingy ny fihetseham-po izay toa tena mahafinaritra ny olona mitafy ny voaly dia ny hevitry ny fampianaran'ny kambana kambana, aseho eo ambanin'ny endrika maro araka ny toetra sy ny fanirian'ny mpino. Tsotra fotsiny, io dia ny lehilahy na vehivavy dia antsasaky ny fisian'olona fotsiny. Mba hamenoana sy hahalavorary ny maha-olona, ​​ilaina ny antsasany ary hita ao amin'ny iray amin'ny firaisana mifanohitra. Fa ireo halavany roa ireo dia natao manokana sy mazava ho an'ny tsirairay, ary tsy maintsy mandehandeha mandritra ny vanim-potoana mandra-pahatongan'izy ireo sy hiray ary noho izany dia mamorona ny tonga lafatra. Ny manahirana anefa, ity hevitra ity dia ampiasaina ho fialan-tsiny amin'ny tsy firaharahiana ny fitsipi-pitondran-tena naorin'orinasa sy adidy voajanahary.
Ny finoana kambana kambana dia iray amin'ireo sakantsakana lehibe indrindra amin'ny fivoaran'ny fanahy, ary ny tohan-kevitra momba ny fihetseham-po kambana dia manimba ny tenany rehefa mijery am-pitoniana noho ny fisainana tsy fantatry ny olona iray izay tsy nahita ny fifandraisan'ny fanahiny na ny antsasany hafa ary iza no tsy Mafy loatra amin'ny fanaintainan'ny bibilin'ny firaisana.
Ny teny hoe sex dia manana dikany arivo mahery amin'ny olona maro mandre azy. Ny tsirairay dia manintona izany araka ny halehiben'ny vatany, ny fianarany ary ny sainy. Ny iray dia midika izany fa ny filan'ny vatana sy ny fanirian'ny biby dia ampitahina, amin'ny hafa ny fahatsapana hatsikana sy ny fitiavana hafa izay asehon'ny fitiavana ny mpivady ary ny andraikitry ny fiainana.
Ny hevitra momba ny firaisana dia ampidirina ao amin'ny tontolon'ny fivavahana, izay iheveran'ny mpivavaka fa Andriamanitra mandrakizay, mahery sy mahery indrindra - izany hoe, ray sy mpamorona ny zava-drehetra - ary reny be famindram-po, izay atolotry ny mpivavaka mifona Aminy, Andriamanitra na Zanaka. Noho izany ny hevitra momba ny firaisana dia nateraky ny sain'olombelona, ​​tsy hoe manjaka eto an-tany afa-tsy izao, fa amin'ny fiparitahan'izao tontolo izao ary maharesy any an-danitra, ilay toerana tsy mety lo. Saingy raha miray amin'ny firaisana ara-nofo indrindra na ambony indrindra ny olona iray dia tokony hisaron-tava amin'ny maha-olombelona an-dàlana azy ity izany sarin'ny Isis. Ny olombelona dia handika foana izay zavatra any an-dafin'ny voaly manoloana ny voaly ijereny.
Tsy mahagaga raha talanjona ny sain'ny olombelona ny fiheverana firaisana. Efa ela no nandrafitra ny lohahevitra teo amin'ireo endrika misy azy ankehitriny, ary ny saina izay nifandray tamin'ny fanovana isan-karazany amin'ny endri-javatra dia tsy maintsy ho gaga azy ireo.
Ary noho izany ny firaisana ara-nofo, ny voaly Isis, dia narafitra tsikelikely ary tamin'ny endrika rehetra, ary ny faniriana hanao firaisana ara-nofo dia nanjaka ary mbola manan-kery. Rehefa nanjary niharihary ny sain'ny firaisana ara-nofo dia nanjary noloko tamin'ny efitra lamba ny fahitana azy. Nahita ny tenany sy ny hafa tamin'ny alàlan'ny voaly, ary ny eritreritra rehetra dia mbola milamina ary hosodoko amin'ny fisalobonana mandra-pahafenin'ny mpiasan'ny voaly ny fanavahana ilay mitafy sy ny voaly.
Toy izany ny zava-drehetra natao hanamboarana ny olona, ​​dia voahodidina ny fisalobonan'I Isis.
Ny Veil dia ampiasaina amin'ny tanjona maro ary matetika miaraka amin'ny vehivavy. Ny natiora dia antsoina hoe vehivavy ary ny endrika sy ny fihetsika nasehon'ny vehivavy. Ny natiora dia manenona lamba manarona ny tenany. Amin'ny alalàn'ny vehivavy dia ampiasaina ho toy ny volon-doko tsara tarehy, voaly fofom-borona, fehiloha matevina ary hiarovana azy ireo amin'ny rivotra sy ny vovoka. Miaro sy manafina ary manintona ny tenany amin'ny alalàn'ny vehivavy ny natiora sy ny vehivavy.
Ny tantaran'ny firafitra sy ny fanalonana ny voaly Isis mandraka ankehitriny, ary koa ny faminaniana momba ny ho aviny, dia atoro sy soso-kevitra ao amin'ny fiainan'ny zanak'olombelona iray hatrany am-bohoka ka hatramin'ny fahatanoran'ny fahatanorana sy ny fahanterana. Amin'ny fiterahana dia karakarain'ny ray aman-dreny ny zaza; tsy nieritreritra izany na tsy miraharaha. Ny vatana kely malefaka miadana dia naka endrika mazava kokoa. Lasa malefaka kokoa ny nofony, mihamatanjaka ny taolany ary mianatra ny fampiasana ny sainy sy ny tongony izy; mbola tsy nianarana ny fampiasana sy ny tanjon'ny firaisana ara-nofo, ny voaly izay nofonosiny. Ity fanjakana ity dia maneho ny endrika voalohany amin'ny fiainana; ireo zanak'io vanim-potoana io dia tsy mba nieritreritra ny fisalobidin'ny Isis, na dia nipetraka tao amin'ny valan'izy ireo aza izy. Ny vatany dia feno ny fiainana, namaly ary nandray andraikitra niaraka tamin'ny singa sy ny hery tahaka ny voajanahary sy fifaliana rehefa mihomehy sy milalao amin'ny masoandro ny ankizy. Ny fahazazana dia tsy mba mieritreritra ny voaly izay hitafy azy, fa ny tsy mbola fantatrao. Izany no vanim-potoana volamena misy ny zanaka toy ny maha-olombelona. Taty aoriana dia mandeha any an-tsekoly ilay zaza ary manomana ny tenany amin'ny asany eto amin'izao tontolo izao; mitombo ny vatany ary mivoatra hatrany amin'ny fahatanorana, mandra-hisokatra ny masony - ary mahita izy ary tonga saina amin'ny fisalobidin'i Isis. Avy eo dia miova an'izao tontolo izao. Maty ny tara-masoandro, ny aloky ny zava-drehetra, mihaona ny zava-drehetra, miangona ny rahona izay tsy nisy hita akory, ny haizina dia toa nanodinkodina ny tany. Ny tanora dia nahita ny firaisana ara-nofo nataony ary toa tsy dia mety amin'ny hitafy izany. Izany dia noho ny fahatsapana tosika vaovao tonga ao anaty endrika ary tonga ao an-tsainy, izay toy ny sampan'ny hazo fahalalana.
Ny angano taloha nataon'i Adama sy Eva tao amin'ny sahan'i Edena ary ny zavatra niainany niaraka tamin'ny menarana dia tapitra indray, ary ny mangidy amin'ny "fianjeran'olombelona" dia efa niainana indray. Nefa ny fahafantarana ny antsoina hoe ota dia lasa fahafinaretana; ny rahona izay manjelanjelatra izao tontolo izao tsy ho ela dia manome karazan-javamaniry sy loko miloko isan-karazany. Mipoitra ny fihetseham-po amin'ny fisalobonana; diso fotsifotsy feno fihodinana dia lasa hira feno fitiavana; vakiana no vakiana; Ny tononkalo dia mifangaro amin'ny misterin'ny voaly. Ny voaly dia ekena sy rovitra — toy ny akanjo miakanjo marobe, fiakanjo fihenan'ny fihetseham-po, akanjo matevina misy tanjona.
Ny fahazazan'ny hazakazaka dia nanomboka tamin'ny fahatongavan'ny andraikitra izay niandohan'ny fifaninanana. Na dia maimai-poana aza, tsikelikely ary tsy mampino, na izany aza, ny andraikitra manoloana ny voaly dia raisina. Ny ankamaroan'ny olombelona ankehitriny dia toy ny lahy-vavy sy ny zaza-ankizy. Tonga eo amin'izao tontolo izao izy ireo, miaina, manambady ary mandia fiainana tsy mahalala ny antony hahatongavan'izy ireo na ny fiaviany, na ny tanjon'izy ireo; Ny fiainana dia zaridaina fahafinaretana, efitrano fanaovana biraom-pifidianana, na seminera tanora-folon'ny toerana nianarany kely sy nanam-potoana tsara tsy misy eritreritra momba ny ho avy, ny rehetra araka ny fironana sy ny tontolo iainany. Saingy misy ny fianakavian'ny zanak'olombelona mahita zava-misy henjana kokoa eo amin'ny fiainana. Mahatsapa andraikitra izy ireo, takatr'izy ireo ny tanjona ary miezaka ny hahita izany mazava kokoa izy ireo ary miasa mifanaraka amin'izany.
Ny olombelona, ​​rehefa niaina voalohany tamin'ny maha-lehibe azy, dia nandray ny fiahiany sy ny andraikitry ny fiainam-pianakaviana, nandray anjara tamin'ny asany ary nandray anjara tamin'ny raharaham-bahoaka, nanao fanompoana ho an'ny fanjakany rehefa niriny, hahatsapa farany fa misy tanjona mistery miasa ao anatiny sy ao anatin'ny efitra lamba izay itafiany. Matetika izy no manandrana misambotra jery fahatongavan-tsaina sy zava-miafina izay tsapany. Rehefa mihalehibe dia mihamahery vaika ny saina ary mihamazava kokoa ny fahitana, ka mihena ny afo mirehitra hatrany amin'ny voaly ary tsy mandoro ny tenany, ary manome ireo afo ireo tsy ho maimbo, ka mahatonga setroka hiakatra sy handrehitra ny fahitana ary haharitra ny saina.
Rehefa fehezina ny lelan'ny filan'ny nofo ary mijanona tsy mandeha tsara ny voaly dia hodiovina sy voadio ho azy ny lambany ary raisin'ny fihevitry ny saina mandinika ny tontolo tonga lafatra. Tsy voafetran'ny fisalonana intsony ny saina amin'izay. Ny eritreriny dia tsy misy afa-tsy amin'ny lela sy ny tenon'ilay voaly ary mianatra ny hisaintsaina ny zavatra izy ireo fa tsy amin'ny endrika sy ny fironana ananan'ny voaly. Ka ny fahanterana dia lasa masaka amin'ny fahendrena fa tsy miditra amin'ny fahalavorariana. Avy eo, rehefa mihamatanjaka ny faharanitan-tsaina ary miharihary bebe kokoa ny maha-Andriamanitra azy, ny lamba eo amin'ny fisalobonana dia mety hasiana lamba ary mety hialana amin'ny fomba an-tsaina. Rehefa averina indray ny voaly dia hiseho indray ny voaly, ny fahitana dia mety ho ampy ary hery lehibe tokoa eo am-piandohan'ny fiainana, hampiasa ny hery mitazona ao anatin'ny voaly ho an'ny tanjona izay hahatongavan'izy ireo amin'ny farany, ary mety ho resy ny fahafatesana.
Ny sarin'ny Isis, firaisana ara-nofo dia mitondra amin'ny olona ny fahoriany rehetra, ny fijaliany ary ny famoizam-po. Amin'ny alàlan'ny efitra lamba Isis dia teraka, aretina, ary fahafatesana. Ny efitra lamba Isis dia mitazona antsika amin'ny tsy fahalalana, ny fialonana, ny fankahalana, ny fahatahorana ary ny tahotra. Miaraka amin'ny firafitry ny fisalobonana ny faniriana mahery vaika, ny phantasies, ny fihatsarambelatsihy, ny fitaka ary ny faniriana ho-o'-the-wisp.
Tokony atao ve ny hanilika sy holavina na marika ny firaisana mba hamongorana ny voaly izay manala antsika tsy ho eo amin'ny tontolon'ny fahalalana? Ny mandà, ny mandà na manafoana ny firaisana ara-nofo dia ny fanalavoana ny fomba tena mivoatra ao aminy. Ny maha-isika antsika mitafy lamba dia manakana antsika tsy handà izany; Ny fandavany ny firaisana dia fandavana ny adidy sy andraikitra iray, ny fanilihana ny firaisana dia ny fikasana lainga ary hanapotika ny fomba ianarana fahendrena amin'ny lesona izay ampianarin'ny adidy sy ny andraikitry ny firaisana ary ny fahazoana ny endrika aseho isis isika toy ny sary eo amin'ny voaly sy ho lesona momba ny fiainana.
Fantaro ny fitafy ny fisalobonana, fa aza atao fahazoana aina ny fitafy azy. Raiso ny andraikitry ny fisalobonana, fa aza manelingelina ny sainy ka tsy hanadino ny tanjona ary ho lasa toaka amin'ny tononkalo fisalobonana. Ataovy ny andraikitry ny fisalobonana, miaraka amin'ny efitra lamba ho fitaovana fampiasa, fa tsy voatazona amin'ilay fitaovana ary ny vokatry ny hetsika. Tsy azo esorina ny fisalobonana, tsy maintsy esorina. Raha mijery tsy mihetsika ao aminy dia mihena ary mamela ny sendikan'ny mahalala miaraka amin'ilay fantatra.
Miaro sy manaisotra ny fisalobonana ny fisalobonana ny fisainan'ny olombelona sy ny fisamborana izay mety hanimba amin'ny tsy fahalalany ny herin'ny voaly. Ny fisalobonan'ny firaisana dia manakana ny saina tsy hahita sy hifandray amin'ny hery tsy hita maso izay entiny manodidina azy, ary izay, toy ny vorona ny alina, dia voasarika ny hazavana izay naloaky ny sainy tao amin'ny tontolony. Ny efitra lamba amin'ny firaisana dia ivony sy kianja filalaovana ny herin'ny natiora. Amin'ny alàlan'ny alàlan'ny fanaparitahana ny salan'isa amin'ny fanjakana samihafa. Miaraka amin'ny fisalobonan'ny firaisana ara-nofo dia mety miditra ao amin'ny sehatry ny natiora ny fanahy, mijery ny fihetsehan'izy ireo, mifankahalala amin'ny fizotran'ny fanovana sy ny fifindrana avy amin'ny fanjakana mankany amin'ny fanjakana.
Misy dingana fito amin'ny fampandrosoana ny zanak'olombelona amin'ny alàlan'ny heloky ny Isis. Efa efatra no lasa, mbola ao anatin'ny fahadimy isika ary roa ny mbola ho avy. Ny dingana fito dia: tsy manan-tsiny, fanombohana, fifantenana, fanomboana, fifindrana, fanadiovana ary fahatanterahana. Amin'ireo dingana fito ireo, ny fanahy rehetra dia tsy maintsy mandalo izay tsy nahazo fanafahana avy amin'ny tsingerin'ny reincarnations. Ireo no dingana fito izay mifandraika amin'ireo tontolo nipoitra, dia manamarika ny fidiran'ny fanahy ho zava-dehibe mba hahazoana traikefa, handresena, hampianarana, ary hahazoany fahalalahana amin'ny resaka rehefa vita ny diany mivoatra.
Ho an'ireo izay mahalala ny dikan'ny famantarana ny zodiaka, dia ho fanampiana amin'ny fahazoana ireo dingana na ambaratonga voatonona, hahalalana ny fomba ampiharana azy fito sy ny fahazoana ny zodiak, ary koa ny hahafantatra hoe inona ireo famantarana ireo izay mihatra amin'ny efitra lamba Isis. In sary 7, ny zodiaka dia aseho miaraka amin'ireo marika roa ambin'ny folo amin'ny baiko efa zatra azy ireo. Ny voaly Isis dia manomboka amin'ny famantarana ny gemini (♊︎) ao amin'ny tontolo tsy voatanisa ary mihena midina avy any amin'ny faritany tsy voafetra amin'ny alàlan'ny famantarana voalohany ny tontolon'ny fisehoan'ny homamiadana (♋︎), ny fofonaina, ilay voalohany niseho tamin'ny tontolo ara-panahy, tamin'ny alàlan'ny toe-tsaina momba ny famantarana leo, (♌︎), fiainana. Lasa maivana sy mavesatra kokoa noho ny fiorenany mandritry ny tontolon'ny astral, izay asehon'ny famantarana ny virgo (♍︎), ny endriny, dia tonga amin'ny teboka ambany indrindra ao amin'ny sign libra (♎︎), firaisana ara-nofo izy io. Avy eo dia mitodika mankany amin'ny arany evolisiona izany, mifanandrify amin'ny làlany midina, amin'ny alàlan'ny famantarana ny scorpio (♏︎); sagittary (♐︎), nieritreritra; capricorn (♑︎), toetra manokana; misy ny fiafaran'ny ezaka rehetra sy ny adidin'ny tsirairay. Ny fandalovana indray mankany amin'ny tsy azo iainana dia miafara amin'ny dingana mitovy, fa amin'ny faran'ny fiaramanidina izay niantombohany tao amin'ny famantarana aquarius (♒︎), fanahy.
Ny efitra lamba amin'ny Isis dia mirakitra amin'ny avo sy ara-panahy ary ny tontolo ambany sy mahatsiravina. Manomboka amin'ny famantarana ny gemini (♊︎), ny singa, ny singa manandanja homogeneous, ao no amboarina tsara, ary midina ao anaty fofony. Isis eny amin'ny haingam-pandehanany ambony tsy misy maso izay mety hahita, satria ny maso mety maty dia tsy afaka manindrona ilay tany afa-tsy izay miseho; fa raha nisy olona nandalo ny dingana fito rehetra, dia avy eo, raha ny fomba fijerena akanjona (♒︎), fanahy dia mahatsapa an'i Isis rehefa izy amin'ny gemini (♊︎), tsy manam-petra, tsy madio, tsy manan-tsiny.
Ny toetran'ireo sehatra fito dia asehon'ny famantarana. Ny homamiadana (♋︎), fofonaina, io dingana io na ambaratonga ahazoan'ny fanahy rehetra handray anjara na mifandray amin'ny tontolo ara-batana; izao tontolo izao tsy voafitaky ny fitaka na fahalotoana, ny sehatra tsy fahadiovana. Ao ny fanjakana ara-panahy sy andriamanitra toa izany, miasa araka ny lalàna manerantany dia mamelona sy mivoaka avy ao aminy, ny zava-panahy, fiainana, amin'ny dingana na ambaratonga manaraka, leo (♌︎), ary toy izany koa no nandalo eo amin'ny fisalobona, ny raharaha ara-panahy dia manangana ny tenany ho endriny.
Ny fiainana ho resaka ara-panahy, dia ao anatin'ny dingana voalohany amin'ny firaisana. Ny foko amin'ny ambaratongan'ny fiainam-piainana dia mifamady. Amin'ity famantarana manaraka ity, endrika virgo (♍︎), dia miditra amin'ny sehatra voafantina izy ireo, ary ireo vatana izay roa sosona ankehitriny dia misaraka amin'ny firaisana ara-nofo. Amin'ity dingana ity dia alaina ny endrika ara-batana olombelona ary tonga saina ny saina. Avy eo dia manomboka ny dingana na ny fahomboana amin'ny hazo fijaliana, izay ialan'ny ego amin'ny alahelo rehetra izay lazain'ny mpamonjy ny fivavahana rehetra. Izao no mariky ny fifandanjana sy ny fifandanjana ao am-pianarana ny lesona amin'ny fiainana ara-batana: tonga nofo ao anaty vatan'ny firaisana izy io dia mianatra ny lesona rehetra izay ampianarin'ny firaisana. Amin'ny alàlan'ny fantsom-piainana rehetra dia mianatra amin'ny alàlan'ny fampandehanana ny adidin'ny fianakaviana rehetra ary tsy maintsy miova amin'ny firaisana ara-nofo rehetra izy. Ny vatan'olombelona fotsiny ihany no ao amin'io sehatra io, fa ny maha-olombelona dia hazakazaka dia ao anatin'ny famantarana manaraka, scorpio (♏︎), faniriana ary haavon'ny fifindrana. An'ity famantarana ity, ny ego dia tsy maintsy mamindra ny faniriana amin'ny firaisana ara-nofo tanteraka (♎︎), ho amin'ny tanjona ambony kokoa. Izao no famantarana sy mari-pahaizana tokony handefasana ny filàna sy ny filan'ny nofo rehetra, alohan'ny hahitana azy avy amin'ireo fiaramanidina anatiny sy ireo hery sy hery izay mihetsika ao anatiny sy ao aorian'ny fisehoana ivelany.
Ny ambaratonga manaraka dia ny fanadiovana ireo endrika-faniriana. Izany dia atao amin'ny fisainana, (♐︎). Avy eo, ny fofona sy herin'ny fiainana dia hita sy tarihin'ny fisainana, amin'ny alàlan'ny faniriana ho any amin'ny dingana farany maha olombelona, ​​izay mahatonga ny olona tsy mety maty. Ny dingana farany sy fahafito dia ny fahatanterahana, eo amin'ny famantarana capricorn (♑︎), ny maha-izy azy; izay naharesy ny filana rehetra, ny hatezerana, ny zava-poana, ny fialonana ary ny fahazaran-dratsy maro, rehefa nodiovina sy nanadio ny sain'ny eritreritra rehetra misy, ary rehefa nahatsapa ny maha-Andriamanitra tsy misy fangirifiriana, dia mametraka ny tsy fahafatesana ny mety maty, amin'ny alàlan'ireo fombafomba mahomby. Ny fampiasana sy ny tanjon'ny Isis rehetra dia hita mazava avy eo, ary ny tsy maty tsy an-tsaina dia manampy ireo rehetra izay mbola miady amin'ny tsy fahalalany ao amin'ny vala ambany amin'ny voaly.
² Jereo The Teny, Vol. 2, No. 2, "Firaisana."
The Word Foundation, Inc. | Publisher of Fisainana sy faniriana
Koa satria 1950